Slackware: Sbopkg iyo SlackBuilds, rakib xirmooyinka si fudud | Laga soo bilaabo Linux
Slackware: Sbopkg iyo SlackBuilds, rakib xirmooyinka si fudud
DMoZ | | Aplicaciones, GNU / Linux, Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Ku sii wadida taxanaha maqaallada isku dayaya in la caddeeyo qaybinta weyn, waxaa la joogaa waqtigii la soo bandhigi lahaa waxa aniga aragtidayda ka mid ah sida ugu fudud ee lagu rakibo xirmooyinka Slackware, waxay ku saabsan tahay SlackBulaha iyo codsi yar oo ah way na fududeyneysaa xitaa nolol dheeri ah markaad maareyneyso, Sbopkg.
Waxaa xusid mudan in qalabkan MA XALinayo ku-tiirsanaanta sida qalabka ugu badan ee loogu talagalay SlackwareSi kastaba ha noqotee, tani waxay noqon kartaa hawl aad u adag, maadaama aan isku dayi doono inaan sharraxno goor dambe.
Waa maxay Slackbuilds?
Marka hore waxaa lagama maarmaan ah in la xuso habka "dhaqameed" ee loogu rakibo xirmooyinka Linux waxay ka soo aruurineysaa koodhka ilaha, kaas oo guud ahaan shaqeynaya laakiin isu muujin kara dhibaato mustaqbalka ah, tusaale ahaan, markii xirmo horey loo rakibay ay isku dayayso inay cusbooneysiiso oo maamulaha nidaamka (adigu) aad illowdo qiimaha isku-duwidda.
Si looga fogaado noocan dhibka ah ee Slackware go'aanka waxaa lagu gaadhay in la isticmaalo a script si aad otomaatig ugu noqoto hawsha rakibaadda, si aad ugu rakibto nooc cusub xirmo kasta, waxa lagaa doonayo oo dhan inaad sameyso waa inaad wax ka beddesho doorsoomaha ku wargelinaya nidaamka ku saabsan nooca xirmadaas.
Ururintaan qoraallo waa loo yeedhay SlackBuilds waana inay dhahaan kuwa ugu yar, kuwa saxda ah ducooyinka soo diray Ilaaha Qaadirka ah Ilaah Tux dhammaan adeegsadayaasha ku fikiray usbuucyo si ay u gaaraan heerka iftiiminta ee u horseeday inay adeegsadaan Slackware (Hooyaday waxay dhahdaa waxaan haystaa male badan) ...
Sida loo adeegsado waa mid aad u fudud, marka hore waxaan aadeynaa bogga uruurinta xirmooyinka Slackbuilds ay ku yaalliin, waxay ku saabsan tahay http://slackbuilds.org/.
oo waxaan u adeegsanaa mashiinkeeda raadinta isku dhafan si aan u helno xirmooyinka aan u baahanahay, tusaale ahaan aan raadino "Flash", markaa waxaan heli doonaa liiska xirmooyinka u dhigma raadinta.
Xaaladdan awgeed waxaan dooran doonnaa inaan ku rakibno «flash-ciyaaryahan-plugin«.
Waan heli doonnaa macluumaadka xirmada in aan dooranno, tusaale ahaan, nooca, sharraxaad kooban, boggeeda rasmiga ah, xiriiriyeyaasha rasmiga ah ee laga soo dejiyo meesha aan ka heli doonno koodhka isha ee qaab-dhismeedyadeedda la heli karo iyo xiriirinta soo dejinta ee SlackBuild yaa daryeeli doona hawsha rakibida.
Waxaan soo dejisanay koodh isha iyo SlackBuild.
Waan soo saareynaa el SlackBuild.
Waan guureynaa el koodh isha (aan la taaban) oo ku jira galka SlackBuild in aan hadda soo saarnay.
Waan furannaa annaga console galka ku jira SlackBuild.
Hadda waxaan abuuri doonaa xirmada rakibo, laakiin marka hore waa lagama maarmaan gasho sida xidid.
para naqshadaha de gelinno 32 waxaan qornaa «. /flash -player-plugin.SlackBuild ».
para naqshadaha de gelinno 64 waxaan qornaa «ARCH = x86_64 . /flash -player-plugin.SlackBuild ».
Geedi socodka baakadaha oo hadday wax walba si wanaagsan u socdeen aakhiro isagaa na siinaya jidka meesha uu yahay xirmo la abuuray, kiiskan waa "/tmp/flash-player-plugin-11.2.202.243-x86_64-1_SBo.tgz".
Hada jar instalar el xirmo iyada oo loo marayo ah qalab in Slackware na siiyaa hawshan (qoraal dambe kadib qalabkan waxaa looga hadli doonaa si qoto dheer), waxay ku saabsan tahay rakib.
Waxaan qornaa "Installpkg /tmp/flash-player-plugin-11.2.202.243-x86_64-1_SBo.tgz".
Geedi socodka rakibaadda oo haddii wax waliba si hagaagsan u socdeen, taas ayaay noo sheegaysaa xirmada ayaa la rakibay.
Sida la arki karo, hawsha ma aha tan dhib badan, inkasta oo ay haa tahay laga yaabo leexo wax yar daallan Mabda 'ahaan, tusaale ahaan, maxaa dhacaya haddii xirmada aan rabno inaan rakibno ay u baahan tahay tiro badan oo ah ku tiirsanaanta, habka loo soo dajiyo mid kasta SlackBuild iyo mid kastaaba source waxay ka dhigi kartaa in kabadan hal go'aan inay ka noqoto qaybinta.
Nasiib wanaag waan tirinaynaa oo leh a qalab taasi oo si weyn u fududeyn karta howsha instalar codsiyada, in kastoo aan ku adkeysto, ha xalin ku tiirsanaanta, "Sbopkg".
Sbopkg, waa a qalab en Khadka taliska in waa wada shaqeeya la socota kaydka de Slackbuilds de slackbuilds.org (SBo), si uun haddii aan dooneyno inaan xirmo xirxirno, waa inaan marka hore tagno slackbuilds.org si loo hubiyo in la heli karo, iyo sidoo kale in la hubiyo magaceeda saxda ah iyo ku-tiirsanaanta ay u baahan tahay.
Isticmaalka ejemplo rakibaadda hore, "Flash-player-plugin", waxaan ogaan doonaa faraqa.
Kaliya ku filan fure "Sbopkg -i flash-player-plugin".
Nota: MAYA waxaa lagama maarmaan ah inaan kala soo baxno midkoodna SlackBuild ni el source, maadaama qalabkani uu daryeelo wax kasta.
waan xaqiijineynaa maxaan dooneynaa inaan rakibno makiinada "P".
Oo waxaan heli doonaa xirmo ya rakibay wax kastoo naqshadeena ah.
Nota: Markii hore waa inaan nahay waxay leeyihiin rakibay sbopkg (Habka hoos lagu faahfaahiyay), codsigan waxaa loo isticmaalaa qunsuliyada mana daneeyo tusaha aan ku jirno.
para instalar sbopkg waa inaan tagnaa boggeeda rasmiga ah download y hel
Mar Waa la fasaxay
Waan furannaa annaga console galkaas iyo waxaan qornaa "Installpkg sbopkg-0.36.0-noarch-1_cng.tgz" (Ha iloobin taas waa in Ser sida xidid)
Anaguna waanu haysanay rakibay sbopkg.
Marka la rakibo sbopkg, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa wada shaqeyn su saldhig de xogta leh tan slackbuilds.org, Tan awgeed waxaan qornaa "Sbopkg -r".
Mar dhammaystiray la wada shaqeyn, waxaan diyaar u nahay instalar mid kasta xirmo laga heli karo sbopkg.
Si loo fuliyo wadista de baakadaha iyada oo loo marayo sbopkg waxaan leenahay dos doorashooyinka, qadiimiga ah xariiqda de amarada ama by sbopkg in uu interface kalkaaliyayaal caafimaad.
Horaa loogu arkay ejemplo hore jidka instalar un xirmo con sbopkg en xariiqda de amarada, laakiin kawaran hadaan rabno instalar un xirmo in u baahan ku tiirsanaanta, si looga fogaado rakibidda xirmo kasta si madaxbanaan, waxaan sheegi karnaa dhammaan baakadaha aan ku rakibeyno gudaha labo xigasho («).
Tusaale ahaan instalar "Supertuxkart" waxay u baahan tahay laba ku tiirsanaan, "OpenAL" iyo "irrlicht".
Marka halkii aad qori lahayd xirmo kasta by kala, waxaan ku qornaa hal khad 'sbopkg -i "OpenAL irrlicht supertuxkart"'.
Nota: Aynu ilaalinno sida baakad kasta loogu kala soocayo meel bannaan oo dhiggooduna ay ku lifaaqan yihiin xigashooyin labalaab ah («)
Sidaa awgeed waxaan ku heli doonnaa supertuxkart oo leh ku tiirsanaanta decks.
Si aad u hesho a liis dhammaystiran ku saabsan doorashooyinka maaraynta xirmooyinka noo ogolaanaya sbopkg, ku filan leh fure koonsoolka nin sbopkg.
La ikhtiyaar kale taasi waxay bixisaa sbopkg, waa iyada oo la adeegsanayo qaabkeeda kalkaaliyayaal caafimaad. Si loo helo, kaliya fure "Sbopkg" qalabkayaga.
Waa maxay bilaabi doonaa una interface halkaas oo aan ka fiirsan karno waxaan ku leenahay doorashooyinka taas ayaa noo oggolaan doonta keydinta, instalar, uninstall, xaqiiqda xirmooyinka ka mid ah kuwa kale, isticmaalkeedu waa mid aad u fudud maadaama ay ku filan tahay xulashada xulashooyinka aan u baahanahay.
Marka si guud loo eego, waa habka aan ku heli karno nidaam Slackware aad loo adkeysan karo, haddii aan isku darno tirada xirmooyinka la heli karo iyo rakibidda Slackware iyo kuwa laga heli karo SlackBuilds waxaan heli doonaa liis aad u dheer oo xirmooyin ah qaybintaan weyn.
Ma jirto marmarsiiyo dheeraad ah aan isticmaalno slackware !!! ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Slackware: Sbopkg iyo SlackBuilds, rakib xirmooyinka si fudud
Aad u xiiso badan hehehe. Waxaan marwalba rabay inaan siiyo distoorkan isku dayga, way fiicantahay, laakiin uma rakibin xaqiiqda fudud ee ah inaanan jeclayn astaanteeda, sida Debian iyo Gentoo. Wax ku biirintan waa la mahadiyey. Waxaad tahay Slackware u dhigma oo ah Perseus leh Fedora, Elav oo leh Debian, iyo KZKG ^ Gaara oo leh Arch XD.
Markaad fursad siiso, waad fahmi doontaa in muuqaalka astaanku yahay kan ugu yar it ...
Hehehe dabcan. Waxaan ku tijaabin doonaa vm ka dibna hardware si aan u arko sida ay u shaqeyso.
Hmm tan tan, igama dhigin inaan rabo inaan mar dambe isku dayo slackware. Hahahaha Anigu waxaan ahay maskaxda nidaamka qalliinka waa inuu ahaado:
Fudud, Degdeg, Deggan iyo softiweer fara badan.
Meesha aan ku raaxeysto Arch anigoo isticmaalaya pacman: D. In kasta oo ay iga dhigtay inaan ku laabto Fedora: D.
«Habka" soo jireenka ah "ee loogu rakibo xirmooyinka Linux wuxuu ka soo ururinayaa koodhka ilaha» mmm ayaa i xasuusiyay gentoo, halkaas oo wax walba lagu soo ururiyo waxaanan jeclahay qoraalka si ka fiican 😀
Slackware waa Fudud, Deg Deg ah, Aad u deggan oo qaddar weyn oo software ah sida aan ku xuso qoraalka ...
Xaq, pacman waa mid aad u raaxo badan ...
Waxaan ula jeedaa inay tahay habka dhaqameed ee Linux, sidaa darteed Slackware iyo dhammaan qeybinnada kale ...
Hadaad aqriso qoraalka waxaad ogaatay inaadan ubaahneyn inaad wax uruuriso, waxay daryeeshaa dhamaan sbopkg ...
Hagaag hadda dib ayaan u soo celiyey qaanso, waxaan helay cayayaanno qaarkood. Ma jecli inaan u adeegsado qaanso cilladahan mar dambe.
Kaliya waxay ogaaneysaa 2 xudunta (waxaan haystaa 4)
Dhibaatooyinka codka, leh iyo la'aanta pulseaudio.
Ilaa hadda kuwaa uun.
Waxaan rabaa inaan u aado disto deggan
Slackware = Xasilloon + "Hadda"
Debian = Xasilloon (laakiin ii oggolaan maayo inaan rakibo, dhammaan isosyada aan soo dejiyo waxay dhahaan: Ma rakibi doono modullada waxayna saameyn ku yeelan kartaa rakibidda)
Markii ugu dambaysay ee aan helo, waxaan gebi ahaanba ku soo noqday si aan u guuleysto.
Slackware malahan paeel pae ???
Haddii kik1n, waxay leedahay taageerada PAE ...
Ma ahan wax fudud, wax walbana way ku fiican yihiin xirmooyinka, laakiin uma arko nimcada inaan waxan oo dhan sameeyo markaan rakibo mashiinka 'distro' oo leh maamule xirmo oo xaliya ku tiirsanaanta waana taas, waxaan dhahay, maxaa yeelay runtu waxay tahay inaan ha u arkin wax faa iido ah taas oo aan ku keenin ku tiirsanaan, laga yaabee inaad keydiso dhowr megabyte oo boos ah, laakiin maxaan ogahay.
Aniguba waan la joogaa
Hagaag hada waxaan ka door bidaa Ubuntu kun jeer distoor kale. Waxaan soo maray ku dhowaad dhammaan Linux, laga bilaabo noocyadiisa xasilloon, rogista iyo tijaabinta.
Haa, Ubuntu waa wanaagsan yahay, qorfaha qorraxda iyo Mate si xun uma shaqeeyaan si fiicanna uma socdaan dhiigbax, haddii ay sidaas tahay, waxaan ka doorbidi lahaa Arch ama Fedora, laakiin hey, laga yaabee haddii ay ka dhigaan inay sii daayaan sidii ay yiraahdeen ayaa sidoo kale wax ka qaban doona dhinacyadaas. Sikastaba, wali waa ikhtiyaarkayga seddexaad.
In kasta oo, hadda aan xiiseynayey qalalaasaha ay wax ku urursan yihiin, si aan u ogaado iyo sababta oo ah waxay yiraahdaan way dhakhso badan yihiin, waa xannuun xagga dameerka ah, laakiin runtu waxay tahay inaanan waligay wax ururin karin, ee halkaas iga caawi .
By the way, run ahaantii ma kaaga sahlan tahay inaad sameysid slackbuild ama miyayna wax badan ka badalin habka dhaqameed ee wax loo ururiyo?
Slackware waxay horey u keentay maareeyaheeda xirmo oo ah pkgtool, Slackbuilds waxaa loogu talagalay barnaamijyada aan ku jirin kuwa rasmiga ah ee ku yimaada DVD rakibida.
Hagaag waxaan isku dayay Arch Linux oo leh abs, laakiin sifiican uma noqon, waxaa jiray xirmooyin dhowr ah oo diiday in la soo ururiyo, laakiin hadii kale waxay ahayd qaab ka badan ama ka yar sidii wax ku ool ah sida isticmaalka sbopkg.
Waan jeclaaday sharaxaaddaada | Xusuusnow inay jiraan ilo kale, oo rasmi ah iyo mid aan rasmi ahayn, laakiin si isku mid ah u ansax ah in lagu rakibo softiweerka «slack» | Uma baahnin inaan wax uun ku soo ururiyo slackware weli. Farxad
Xaqiiqdii, ku dhowaad wax kasta oo aan u baahanahay waxaa loo helaa xirmo rasmi ah ama waxaa loo arkaa inay tahay SlackBuild ...
DMoZ, waad ku mahadsantahay ka wargalinta ku saabsan Slackware, qeybinta degen oo deg deg ah, oo leh softiweer wanaagsan, sidoo kale waa la cusbooneysiiyay, waxayna i aaminaysaa in si fudud loo isticmaali karo, laakiin in la gaaro gabagabeyntan sida kaliya ee ay tahay waa in la rakibo oo la isticmaalo dhamaan qalabkeeda.
Slack ha noolaado.
Waxaan si buuxda kuugu raacsanahay Mudane Linux ...
Waxaan horeyba tan uga dhigay caqabad shaqsiyadeed, si aan bulshada u siiyo macluumaad ku saabsan distoorkaan oo ku qoran luuqadeena, iyo meel kale oo lagu sameeyo marka laga reebo barta weyn =) ...
DMoZ wax ku biirinta ugu fiican, sidoo kale ogow inay jiraan bogag kale oo aad ka heli karto SlackBuilds sida dayactirka nooca 64-bit Eric «AlienBOB» Hameleers http://slackware.com/~alien/slackbuilds/ ama bogga talyaaniga http://www.slacky.eu/. Waqti ka hor waxaan abuuray dhowr xirmo oo hadda ku yaal SlackBuilds.org, haddii aad xiiseyneyso inaad barato sida loo xirxiro oo aad u baahato caawimaad, haka labalaaban inaad weydiiso 😉
Waxaan xasuustaa in marki iigu dambeysay ee aan hubiyo SB-yada Shisheeyaha ay ahaayeen xirmooyin xoogaa duug ah, oo jilicsanaanta ayaan ku booqday si aan u helo codsiyo horay loo soo baakadeeyay oo diyaar u ah in lagu rakibo installpkg ...
Waxaan ku siin doonaa dib u eegis kale waxaanan halkan u imid inaan la wadaago natiijooyinka ...
Thanks Thanks, haddii aan xiiseynayo barashada sida loo sameeyo, isla marka aan helo waqtiga aan ku baaro waan kula soo tashan doonaa haddii aan wax ku dhego ...
Farxad !! ...
Haboon, waxaan ahay arday aamin ah oo kaa ah, haddii aad na baraysid sida loo xirmo Slackware.
Waxay umuuqataa mid qabow oo wixii aad sheegtay sida muuqata ma ahan wax adag ...
Waxaan tijaabiyey qiyaastii 3 sano kahor, waxay isiisay dareen amni. In kasta oo ku tiirsanaanta ay dib ii soo tuurtay ...
Hadana, sida aad soo sheegtay, waxaa jira baakado badan oo noloshaada kuu fududeynaya adoo aan u baahneyn inaad soo uruuriso, laakiin waxaan u maleynayaa in waxa gaarka ka dhigayaa ay tahay in uu yahay distoor hore oo sidaas darteed, iyo sidoo kale qaanso, isagu waa inuu adeegsadaa nabdoon iyo keydka rasmiga ah ee keydkiisa wax isaga ayaa uruurinaya. Taasi waxay ku siinaysaa barasho (sidoo kale waa run in dhammaanteen aan wada joogin waqti ama rabitaan aan ku bilawno qorista), laakiin waxaan u maleynayaa in falsafadda slackware ay uga dhowdahay falsafadda adduunka bsd kan adduunka Linux. Halka ururinta iyo fiirinta ku-tiirsanaanta waxyaabaha kale ay muhiim tahay.
Waa run inay aad u wanaagsan tahay inay jiraan qalab fududeynaya nolosha isticmaalaha, laakiin waxaan aaminsanahay inaysan taasi ku habboonayn falsafadooda. Iyo sida wanaagsan ee loo yaqaan 'KISS distro', sheykiisu waa inuu soo ururiyo oo uu ka tago tabta isagoo arkaya ku tiirsanaanta (ugu yaraan bilowga).
Waxaan u maleynayaa in haysashada xirmooyinka vaniljku ay ka dhigeyso mid gaar ah, iyo in dhammaan dadka jecel Linux ay isku dayaan afarta dirood ee sameeya Linux gaar ahaan muhiim oo wax ku soo kordhiyay: Debian, Slackware, Arch iyo Gentoo.
Waan ka xumahay faalladayda dheer, waxaan kordhiyay wax ka badan intii ay ahayd.
Tan oo dhan, waa lagu qanacsan yahay inaad gacan ka geysato casharrada Slackware iyo wax badan, inbadan oo ogaanaya inay aad ugu yar yihiin luqadda Isbaanishka shabaqa. Markaa sidoo kale waa lagu qanacsan yahay inaad ka dhigto mid xiiso leh oo fudud.
Sidaan idhi, Slackware waa KISS aad u liidata, waxyaabaha ku tiirsanaanta wax dhib ah malahan, waxaad aadeysaa SlackBuilds.org oo halkaasna waxay ku calaamadeeysaa ku-tiirsanaanta ay u baahan tahay xirmada x, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad nuqul ka sameysid magacyada kuwa ku tiirsan iyo qunsulka samee:
#sbopkg -i "xirmo dep1 dep2 dep3 dep4"
Iyo voila, xirmada waxaa lagu rakibay ku tiirsanaanta la daboolay ...
Guud ahaan waa wax aad u fudud ...
Waan kuu xiisay Fedora, mid ka mid ah kuwa sida ugu badan wax ku biiriya.
Sikastaba, uma baahnid inaad uruuriso, slackbuilds, waxaanan u maleynayaa in xirmo kasta .txz ama .tgz ay diyaar u yihiin inay rakibiyaan, laakiin iyagu ma xalliyaan ku tiirsanaanta. Haddii aad rabto inaad uruuriso, hesho LFS ama rakibi Gentoo, Slackware sidoo kale waad soo ururin kartaa isla, laakiin waa isku mid ama xitaa ka sii wanaagsan in la isticmaalo wax kasta oo distoor ah.
Ah ha qaldamin, slackbuilds waa in la soo ururiyaa, laakiin natiijada waa xirmo diyaar u ah in la rakibo
Boostada waa la mahadiyey. Iyada oo sbopkg ku tiirsanaantaadu ay umuuqdaan kuwo loo adkeysan karo. Taasi waxay ahayd waxa aan ugu jeclaa ee ku saabsan slackware. Runtu waxay tahay inaan xilligan la joogo u maleyn maayo inaan adeegsanayo. Aad ayaan ugu qanacsanahay qaansada oo waxyaabo kale ayaa gacmahayga ku jira, laakiin waxaan u tixgelin doonaa inay tahay ikhtiyaar mustaqbalka ah.
Wax aan lagu mahadin =) ...
Haa, waxay u muuqataa inay tahay mid aad iyo aad loo dulqaadan karo ...
Ha noolaado Slackware, ha noolaado Arch, ha noolaado Linux !!! ...
Slackware waa wax fudud oo dhab ah, uguna badan Linux. Dhibaatadeeda weyn ee hadda jirta ayaa si sax ah u ah Unix, qiime ay isaga iska bixiso, BSD iyo xitaa Gentoo. Mawduucan maaraynta ku-tiirsanaanta waxay siineysaa dhadhan adag oo Unix ah, laakiin sida wax kasta oo kale, waan jeclahay jiiska buluugga ah waxaanan qirayaa inaysan ahayn wax dad badani jecel yihiin.
In kasta oo qaansoley badan ay kacsan yihiin, haddana waxyaabaha ugu weyn ee KISS waa Slackware, Lilo, Sys V, iyo qaabab badan oo BSD ah meel kasta. Marka la soo koobo, waxay ku buuxsamaysaa fudeyd. Kuwo badan ayaa laga yaabaa inay u maleeyaan ku noolaanshaha waagii hore laakiin waxay ila tahay inay tahay "astaan" arrin, hal shay ama mid kale, gudaha KISS ma jiro meel dhexe.
Hadda waxaan isticmaalaa wiilka ugu da'da weyn Slackware, openSUSE, in kasta oo aysan wax badan wadaagi karin, haddaan jaleecno buugga Slackware waxaan arki doonnaa inay weli jiraan qaar ka mid ah hiddo-wadahaas oo way igu hambalyeysaa.
DMoZ: chapó, waxa aad sameyneyso waa inay unesco u aqoonsataa inay tahay hanti bini'aadanimo oo aan la taaban karin. 🙂
= D Krel saaxiibkay !!! ...
Waan kugu raacsanahay, Slackware waa qaybinta ugu badan ee Unix jirta (waa hagaag, ugu yaraan kuwa aan isticmaalay, iyo waxaan isticmaalay xD badan) ...
Qaar badan oo ka mid ah qodobbadan ayaa ku mahadsan Krel, oo sidii loo ballanqaadayba, ictiraafku wuxuu ku dhammaanayaa maqaalkii hore ...
Haa waan arkay, waan ku daba socday. You Mahadsanid. Si kastaba ha noqotee dhammaan amaahdu adigaa iska leh, waxaad qabataa shaqo cajiib ah oo ku saabsan boostooyinka.
= D Mahadsanidin !!! ...
Maalin maalmaha ka mid ah waa inaad nagu sharftaa qoraalladaada dhinacyadaas ...
Maqaal wanaagsan oo loogu talagalay kuwa waqtiga iyo aqoonta u leh oo aan ka fikireynin inay wax qaldamaan oo dib loo rakibo haddii wax qaldamaan, aniga oo da 'ah (oo aan maanta cusbooneysiiyo sanad kale) adkaado waqtiga, laakiin kuwa sameeya Linux iyo S, O, noloshiisa sharraxaadani waa inay noqotaa keeg kumbuyuutar aad u fiican oo si wanaagsan loo qurxiyey.
Kaliya waa dhiirigelinta dib loogu celiyo bulshada wixii ay qabteen ...
Sababo layaableh awgood waxaan dareemayaa waxbadan oo kadhiman markii aan aqriyay pacman iyo yaourt = Foomka rakibida O ... wali wax badan ayaa iiga dhiman barashada
Kadib waa inaad dib u aqriso maqaalka xD ...
Way ka fududdahay sida muuqata xaqiiqda, wax walba waa ku filan yihiin in lagu dhaqmo ...
Aad ayey ufiican tahay, shaqada faafinta ee aad qabanaysid waa mid lagu farxo.
Halkaa ka sii wado, tixgelin
= D Mahadsanid walaal !!! ...
Waa inaan qirto in balooggaagu wax badan iiga adeegay oo uu saameyn weyn ku yeeshay go'aankeyga ku saabsan sameynta maskaxdayda ku saabsan Slackware, oo aan aad ugu riyaaqay =)…
Slackware waa tan ugu nadiifsan Linux ee aragtidayda oo aan lahayn wax lagu daro. Waligeed waxba uma dhiman, waxay kaliya siinaysaa dadka isticmaala xorriyadda ay ku samaysan karaan nidaam caado ah. Maaha wax loogu talagalay kuwa ku seexda Laureles. Waa nidaam run ah oo loogu talagalay Scouts-ka oo jecel inay wax walba u bartaan si tartiib tartiib ah. Isticmaalayaal badan ayaan qadarin taas. Waa distooriga oo leh darsin wanaagsan oo hagaagsan. Maaddaama ay jiraan xulashooyin badan oo adduunka Linux ah isla ujeeddooyin isku mid ah, Slackware waxay bixisaa aragti ah OS fudud oo fudud. Loogu talagalay barnaamijyada ama sahamiyayaal tiknoolajiyad qoto dheer.
Jawaab si loo xidho
Waan salaamayaa DMoZ iyo dhamaan asxaabta Slackware !!!
Caramba !!! qudhaanjadaani yar ee loo yaqaan "sbopkg" waa yaab !!!
Taasi wax walba ayey qabataa !!!
Xalay waxaan bilaabay inaan rakibo Chromium 24.0 (anigoon isticmaalin "sbopkg"), oo hal ku tiirsanaan keliya leh, oo aan aad u garnaqsanahay, waxaan soo dejiyey Ilaha iyo SlackBuilds ee labadaba (Chromium iyo ku tiirsanaanta) waana inaan isku hubiyaa dulqaad, maxaa yeelay noocaani Chromium MA ubaahan yahay dulqaad.
Aniguna waxaan xasuustay inaan ubaahanahay inaan rakibo VLC, fiidiyowga aan ugu jeclahay ... Oo walaaa! Waxay leedahay 23 ku-tiirsanaan, taas oo siinaysa 48 soo dejin gacanta ah (oo kaliya ilaha iyo SlackBuilds) marka lagu daro hababka ku lug leh rakibidda. Ufff !!! Waan niyad jabay, MA DIIDO. Si kastaba ha noqotee, waxaan kafee ka diyaariyey Kolombiya aan jeclahay oo aan shaqo bilaabay.
Intii aan soo dejinayay ku tiirsanaanta waxaan eegay casharradan iyo arjigaas oo loo yaqaan "sbopkg" - fudud, yar, aan waxba galabsan, «qarsoon» laakiin SHAQAYNTA, sida qudhaanjada - ... mmmm ... Waan joojiyay soo degsadyadii, waxaan ku rakibay qudhaanjada ka dhigtay inay la shaqeyso dhammaan kuwaas ku tiirsan iyo sida cajiibka ah !!! Waan cabay kafeeyga taasna iyadaa iskeed sameysay !!! Waa layaabkeyga, maxaa yeelay Slackware-ka waligey tan kuma arag.
Waan jeclahay tan badan iyo tan badan.
Salaan ka timid Colombia !!!
Haa, waan jeclahay sbopkg, waa wax weyn.
Waxa kale oo jira hab kale oo lagu rakibo baakadaha aan aad u jeclaa.
sbopkg waa cajiib, way fududahay in lagu rakibo xirmo qalabkan, iyadoon loo eegin inta ku tiirsanaanta xirmadu leedahay.
Marka la eego chromium, waxaad dhahdo waa run, in lagu rakibo nuucaan waa inaad samir badan tahay dhadhankeygana uma qalmo inuu Firefox yeesho.
Waa salaaman tahay, in kasta oo aan sannado badan isticmaalayay Linux, tani waa markii iigu horreysay ee aan rakibo qalab jilicsan. Waxaan bilaabay inaan jeclaado laakiin waxaa jira hal shey oo madaxayga jabiya, fiiri inaad i caawin karto iyo inkale ...
Si loo rakibo Vlc waxaan bilaabayaa waxyaabaha soo socda:
sbopkg -i "a52dec faad2 twolame lua portaudio libavc1394 libdca libdvbpsi libdvdcss libdvdnav libmatroska libmodplug libmpeg2 libshout libupnp schroedinger vcdimager faac musepack-tools ffmpeg speex"
Way dhacdaa inay jiraan ku-tiirsaneyaal i siiya qalad rakibaadda, midkoodna sababtoo ah waxaa jira nooc duug ah oo ku-tiirsanaanta oo mid hadda jira ayaa loo baahan yahay, ama maxaa yeelay maktabadda .h ayaa la la'yahay sida dhacda libmastroska.
Mar kasta oo aad hesho nooc khalad ah, waa inaad ku rakibtaa ku tiirsanaanta jaban ee terminal kale oo aad dib isugu ururisaa wax kasta oo loogu talagalay vlc.
Wax qaldan ayaan sameynayaa? Ma i caawin kartaa?
Taasi waa sababta aanan ugu sii jirin Slackware.
Tilmaamahan ayaa kaa caawinaya, oo waxaan ku dabaqayaa xirmooyin badan, si fiican ayuu u shaqeeyaa.
Waxaan kugula talinayaa inaad sifiican u aqriso.
Maxaad ugu talinaysaa Gentoo in ka badan qalabka wax lagu nadiifiyo? Waxaan isku dayi jiray Sabayon hal jeer laakiin si layaab leh nidaamku wuu uga gaabinaayay ubuntu ama lakabka Linux ...
Maya, waxaa jira adduun farqi u dhexeeya sabayoon iyo Gentoo.
Gentoo waxay kun jeer ka orod badan tahay dhammaan nidaamyada hawlgalka la isku geeyay (waa laga yaabaa inaan buunbuuniyo), laakiin haa, waa dhakhso badan
Ka xasilooni badan debian iyo slackware.
Kaliya waxaan kala hadlay Tete Plaza wax ku saabsan gentoo iyo waxqabadkooda.
Waxaan rajeynayaa in tani ay ku caawin karto. 😀
Si tartiib ah dijo
Sheekadu sidaas maahan !!
Slackbuilds.org waa degel bixisa isla qoraallo isku mid ah sida slackware rasmi ah. Bixinta Slackbuilds macnaheedu maahan inay tahay il rasmi ah. Boggan waxaa gacanta ku haya kuwa wax ku darsada sidaas darteed waqti ka waqti waxaa dhaca marmar arday ka tagta oo waxaa naga dhammaanaya xirmooyinka la cusbooneysiiyay. Slackbuild waa qoraal lagu abuurayo xirmo diyaar u ah in lagu rakibo Slackbuild wax la mid ah rpm spec, Waxaa jira bixiyeyaal kale oo Slackbuilds ah, Slackbuilds.org waxay leedahay dhibic dheeri ah maxaa yeelay xitaa abuuraha Slackware halkan ayuu ku hareeraysan yahay. Maareynta slackbuild maahan oo kaliya ku saabsan soo dejinta nooca xirmada oo way shaqeysaa, waa inay jirtaa nidaamka isdhexgalka iyo waxaas oo dhan, hadaadan i rumaysanayn, iska hubi marinka horumarka ee Slackbuilds.org.
Si loo caddeeyo waxaa la yiri qaraabo!
Waxaan bilaabayaa aduunka Linux waxaan rakibay slackware tan iyo markii aan waxbadan ka aqriyay OS-ga dhibaatadayda hada haysataana waa inaanan rakibi karin OpenOffice Fadlan codso taageero iyo sidee tahay habka rakibida. mahadsanid. Fadlan ku qor e-maylkayga ku saabsan mawduucaan laga hadlayo.
Jawaab LUIS ALBERTO.
Waad i badbaadisay, waxay igu kacday inaan arko sida loo rakibo barnaamij cusub waa hawl badan, waxaan saarnaa daaqadaha waxaan dhigay shaashad buluug ah pendrive, nidaamka kaliya ee soconayay ayaa ah slackware 14.2 laakiin sababta aan usii wado barashada waxaan ku dhawaaday inaan ku tuuro tuwaalka hahaha, Mahadsanid!
Sida loo isticmaalo Synaptic oo leh taageerada GTK 3